Zvinhu Zvinobatsira Zvevakweguru | Karman® Mawiricheya
Posted on July 19, 2013 January 6, 2021 by csr 1687
Kukwegura chikamu che upenyu izvo hapana anogona kudzivisa. Kunyangwe uri wega kana nhengo yemhuri, izvo yakakosha kuyeuka kune zviwanikwa zviripo zvekubatsira kunanga chero chinogumbura kana mubvunzo. Munhu achembera anofanira kubatwa zvine chiremerera neruremekedzo. Pazasi pane anobatsira zviwanikwa gwara rakanangwa kubatsira chero munhu ane mibvunzo.
Chirwere cheAlzheimer uye Dementia Yakabatana
Alzheimer's Disease Research Center- Ruzivo uye nzira dzakasiyana dzekuyera mashandiro uye mashandiro anoita ane chekuita neAlzheimer Disease. Chiyeuchidzo uye Kukwegura Center - Chinyorwa che dementia zviwanikwa zviripo zvinosanganisira mawebhusaiti, mabhuku, zvinyorwa, uye mavhidhiyo. Sangano reAlzheimer - Dzidza nezveAlzheimer's Disease uye nhau dzichangoburwa pairi. National Insititute Yekukwegura - Ruzivo nezveAlzheimer's Disease inosanganisira zviratidzo, ruzivo rwakawanda, kubata, uye kurapwa kwechirwere. Alzheimer's, Dementia, uye Kutyaira - Ruzivo, zviwanikwa, uye rutsigiro paAlzheimer's Disease.
Inobatsira Technology uye Kukwegura
Sage Zano - Ruzivo uye rubatsiro netekinoroji yekubatsira. Zviwanikwa zvepaInternet - Chinhu chekushandisa chekubatsira tekinoroji uye kuremara ruzivo. Intellectual Kuremara, Kukwegura & Dementia - Ruzivo uye rubatsiro rwevanhu vakaremara, kusanganisira kutsvagisa uye kudzidziswa.
Bhuku Rinochengeta Mhuri - Ruzivo uye rubatsiro kuwana rutsigiro rutsigiro uye zviwanikwa zvinobva kunze kweMassachusetts. Anochengeta Zviwanikwa- Muunganidzwa wemakomboni akasiyana evanochengeta pamisoro kubva kuzvinhu zvekushandisa kuenda kumari. Murwere / Anochengeta Zviwanikwa- Nhungamiro uye runyorwa rwemawebhusaiti ekuti ungawana sei rubatsiro rwakakodzera mushure mekugamuchira kuongororwa. Other Resources- Mawebhusaiti akasiyana siyana ane ruzivo rwekuchengeta.
Kudzivirirwa Kwevatengi & Vakwegura
Chirongwa Chevakuru Kudzivirira Vatengi- Chirongwa chekufambira mberi uye chekudzidzisa chevanyanzvi pazvinhu zvakajairika uye zviri pamutemo kuvanhu vakuru. Internet Zviwanikwa zveGerontology - Ruzivo rweVakwegura Kushungurudza uye Kubata Chirongwa. Family and Consumer Sciences- Kuongororwa kweveruzhinji uye akazvimirira kuchengetedza vatengi uye zviwanikwa zvevakuru. Molly Bish Center- Ruzivo pane nzvimbo inotarisana nekudzivirira kwevakwegura.
kuremara uye Kukwegura
Maine Kukwegura Zviwanikwa - Izvo zvakasiyana siyana zviwanikwa uye zvinongedzo zvevakuru, vakuru, uye vana vakaremara. Zviwanikwa Zvakwegura Zvinowanikwa kuCentre yevakaremara Zviwanikwa Raibhurari- Zviwanikwa zvinowanikwa kune vakwegura vakaremara. Kukwegura uye kuremara - Zviwanikwa zviripo zvinokurudzira kukwegura uye kuremara resources. Zvirongwa Zvehurema - Ruzivo rwevanhu varipo kuremara kuburikidza nekuchengetedzwa kwevanhu. Akaremara Tsvagiridzo Institite - Iyo peji rezvinhu zvakasiyana siyana zvepamhepo ruzivo rwevanhu vakura vakaremara.
Mutemo Mukuru- Iyo peji rezvinyorwa rezvinongedzo zvevakuru mutemo ruzivo uye magwara ekutsvagisa. Kuchembera nekukudzwa- Chirevo chekurapa mumitauro makumi maviri chinopa murwere mashanu anoshuvira kuti murwere akura anoda kuve akagadzirwa. Vakwegura Vanhu Vanoshanda Kureba Zvishoma- Chinhu chinowanikwa chinobatsira vanhu vakura murandu kodzero dzavo uye vanopokana nekusarura. International Federation nezve Kukwegura - Ruzivo pasangano repasirese risiri rehurumende rinotenda shanduko yakanaka kuvanhu vakura pasirese.
Exercise uye Fitness
Nguva Yezvinodzvinyirira - Ruzivo pamhedzisiro yekurovedza muviri ine pauropi. Welcome to Resources for Exercise Science Indivividuals- Informational resources on health and fitness for the older. Kuekisesaiza Panyama Kunodzivirira Uropi Hwako sezvo Iwo Makore- Statistics - Ruzivo rwekuti sei muviri muviri inobatsira uropi hwekukwegura.
Resource Peji Yevanamukoti Kumba Vashandi Vemagariro- Ruzivo nezve dzimba dzekuchengeta vakwegura uye mabasa ebasa rezvemagariro. Mhuri Resource Center- Chinyorwa cheunyanzvi hwekuchengetedza dzimba dzekushandisa. Maimba ekurapa- Zviwanikwa pamisha inochengeterwa vakwegura uye zvikamu zvakasiyana zviripo. Usati Waenda Kunogara Mukoti- Chinyorwa nezve izvo zvaunofanira kufunga usati waenda kunogara mumusha unochengeterwa vakwegura. Resource Center pakukwegura - Inzvimbo inopa ruzivo uye dzidzo kune vakwegura uye dzimba dzekuyamwisa.
Utano hwepfungwa uye Kukwegura
Utano hwepfungwa uye Kukwegura- Chishandiso chekurwara nepfungwa uye nehukuru hwewebhu zvinongedzo. Center yeMental Health uye Kukwegura- Inzvimbo yedzidzo, kuyedza, nekuparadzira ruzivo nezvekweguru uye hutano hwepfungwa. Mental Hutano & Kukwegura Chirongwa- Chirongwa chinopa dzidzo, kudzidziswa, uye kubvunza varapi. Center yeMental Health uye Kukwegura- Inzvimbo yakatsaurirwa mukuvandudza hupenyu hwevanhu vakura vanogara munharaunda. Hutano hwepfungwa & Kukwegura - Chirongwa chakapihwa kudzidzisa nekusimbisa netiweki kune vakura vane matambudziko epfungwa. National Hupenyu Hwehupenyu, Hutano, uye Kukwegura Chirongwa- Chidzidzo chakanangana nekutsvaga nzira dzeku kuvandudza hutano sevanhu vanokwegura.
kutakura uye Mobility
Zvinodiwa zvekufambisa zveVakwegura maAmerican: Zvinotakurwa nekutakura Reauthorization- Chinyorwa pamusoro pekukosha kwe kutakura kune vakweguru. Kufamba Kwakachengeteka Kwevanhu Vakwegura- Ruzivo pamhedzisiro yekutyaira kwevakuru kune nzanga uye nemhedzisiro yakaipa kune vanhu vakuru. Hutano Kukwegura Column- Kufambisa kweVakwegura Vagari - Ruzivo rwekuwedzera kwehuwandu hwetsaona dzemumigwagwa dzinokonzerwa nevakuru. Vanofamba-famba Vanofamba Vanobatsira Vakwegura- Mashoko pamusoro pevakwegura uye sei chakakosha icho kuva kufamba.
Vashandi & Kukwegura
Kuchembera & Kushanda- Ruzivo nezvekweguru muvashandi. Economics yeiyo Kukwegura Shanduko- Ruzivo uye newebhu zvinongedzo mukudzivirira kwevakwegura vari kubasa. Vashandi Vanotapurwa neMamiriro Asingagumi: Maitiro ebasa uye zvirongwa zvinogona kubatsira sei?- Chinyorwa pamusoro pemaitiro emabasa uye mamiriro asingaperi nemhedzisiro kune vakwegura. AGS Foundation yehutano mukukwegura - Zvishandiso kune vakwegura munzvimbo yebasa. Chirongwa- Chirongwa kubva kuChikoro cheVashandi & Hukama Hwezvemabhizimusi chinotarisana nemitemo inorwisa kusarura kwevakwegura munzvimbo yebasa. Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndeyekuti chikwereti chidzokere kune yedu saiti.
Multiple Sclerosis (MS) Peji Ruzivo